မန္တလေးမြို့မှာ ဒီတစ်ပတ်ပြုလုပ်မယ့် ပွဲတွေထဲက သင်ဘယ်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားဆုံးလဲ - Mandalay Directory
မန္တလေးမြို့မှာ ဒီတစ်ပတ်ပြုလုပ်မယ့် ပွဲတွေထဲက သင်ဘယ်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားဆုံးလဲ
Friday, 10 January 2020 14:08
ဇန်နဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့မှ တစ်ပတ်အတွင်း မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် ပွဲတော်အခမ်းအနားတွေကို တစုတစည်းတည်း ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ January Cleanup
ဇန်န၀ါရီလရဲ့ ပထမအကြိမ် အမှိုက်ကောက်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ၁၁ ရက်နေ့ (စနေနေ့) မနက်မှာ ​ရေစစ်​ကန်​ (လမ်း၆၀ ၂၂လမ်းက​နေ ၂၆လမ်းအထိ) ပတ်​၀န်းကျင်​မှာရှိတဲ့ အမှိုက်​များကို သန့်​ရှင်းရန်​အတွက်​ အမှိုက်ကောက်တဲ့ ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒုဌဝတီ Offroad Challenge
အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ကား Offroad 4x4 ပြိုင်ပွဲနဲ့ ဆိုင်ကယ် Offroad Enduro ပြိုင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက် ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ မှာ ဒုဌဝတီမြစ်ကမ်း၊ ၁၀ မိုင်၊ မန္တလေးမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပန်းသတင်း ဆောင်းရာသီ အားကစားပွဲတော်
ပန်းသတင်းကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ ကြီးမှုးပြီး၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပန်းသတင်း ဆောင်းရာသီ အားကစားပွဲတော်ကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ နံနက် ၉နာရီနဲ့ ၁၇ရက်နေ့ နေ့လည်၃နာရီတွင် ပန်းသတင်းကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
ရွှေဒေါင်းမင်း မြေပဲဆုံဆီနှင့် ဆန်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ မှ ​နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ အမှတ် ၁၃ခ/၇ ၊ ၇၈လမ်း ၊ ၄၃×၄၄ လမ်းကြား၊ မဟာ​အောင်​​မြေ မြို့နယ် မန္တ​လေးမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာစြဖ်ပါတယ်။
၅။ 2nd Aquascaping Show In Mandalay
Aquascaping Show ဆိုတာကတော့ ရေအောက်မှာ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ အပင်တွေရဲ့သဘာဝပုံစံ တွေကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ မှန်ကန်ထဲမှာ တုပဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဒုတိယကြိမ်မြောက် Aquascaping Show ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီမှ ၁၉ရက်နေ့ ည ၉နာရီထိ 73 Ocean ဘေးမှာရှိတဲ့ The Move မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ 3rd International Hospitals & Health Care Expo 2020
Royal Heart က ရွှေမန်းသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမယ့် အထူးခြားဆုံးကျန်းမာရေး ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ International Hospitals & Health care Expo 2020 ကို
၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ထိ ၃ ရက် တိုင်တိုင် မန္တလေးစည်ပင်ခန်းမ Booth No. C – 19/20 မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇနျနဝါရီလ(၁၁)ရကျနမှေ့ တဈပတျအတှငျး မန်တလေးမွို့မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမယျ့ ပှဲတျောအခမျးအနားတှကေို တစုတစညျးတညျး ကွညျ့ရှုနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဇနျနဝါရီလရဲ့ ပထမအကွိမျ အမှိုကျကောကျခွငျး အစီအစဉျကို ၁၁ ရကျနေ့ (စနနေေ့) မနကျမှာ ရစေဈကနျ (လမျး၆၀ ၂၂လမျးကနေ ၂၆လမျးအထိ) ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ အမှိုကျမြားကို သနျ့ရှငျးရနျအတှကျ အမှိုကျကောကျတဲ့ ပှဲ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အထကျမွနျမာပွညျရဲ့ ပထမဆုံး ကား Offroad 4x4 ပွိုငျပှဲနဲ့ ဆိုငျကယျ Offroad Enduro ပွိုငျပှဲကို ဇနျနဝါရီလ ၁၂ ရကျ ဇနျနဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ မှာ ဒုဌဝတီမွဈကမျး၊ ၁၀ မိုငျ၊ မန်တလေးမှာ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။
၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈ ပနျးသတငျး ဆောငျးရာသီ အားကစားပှဲတျော
ပနျးသတငျးကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးမှ ကွီးမှုးပွီး၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈ ပနျးသတငျး ဆောငျးရာသီ အားကစားပှဲတျောကို လာမယျ့ ဇနျနဝါရီလ ၁၃ ရကျနေ နံနကျ ၉နာရီနဲ့ ၁၇ရကျနေ့ နလေ့ညျ၃နာရီတှငျ ပနျးသတငျးကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ ဆိုငျဖှငျ့ပှဲ ဖိတျကွားခွငျး
ရှဒေေါငျးမငျး မွပေဲဆုံဆီနှငျ့ ဆနျရောငျးဝယျရေးဆိုငျ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို လာမယျ့ ဇနျနဝါရီလ ၁၄ရကျနေ့၊ နံနကျ ၈ နာရီ မှ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီအထိ အမှတျ ၁၃ခ/၇ ၊ ၇၈လမျး ၊ ၄၃×၄၄ လမျးကွား၊ မဟာအောငျမွေ မွို့နယျ မန်တလေးမွို့မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာစွဖျပါတယျ။
Aquascaping Show ဆိုတာကတော့ ရအေောကျမှာ ရှငျသနျပေါကျရောကျနတေဲ့ အပငျတှရေဲ့သဘာဝပုံစံ တှကေို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အလှယျတကူကွညျ့ရှုနိုငျဖို့ မှနျကနျထဲမှာ တုပဖနျတီးထားတဲ့ အနုပညာတဈရပျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ဒုတိယကွိမျမွောကျ Aquascaping Show ကိုတော့ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ရကျနေ့ နံနကျ ၉နာရီမှ ၁၉ရကျနေ့ ည ၉နာရီထိ 73 Ocean ဘေးမှာရှိတဲ့ The Move မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Royal Heart က ရှမေနျးသားတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို အကောငျးဆုံးဝနျဆောငျမှုတှပေေးမယျ့ အထူးခွားဆုံးကနျြးမာရေး ပှဲကွီးတဈခု ဖွဈတဲ့ International Hospitals & Health care Expo 2020 ကို
၁၈ ရကျနမှေ့ ၂၀ ရကျနထေိ့ ၃ ရကျ တိုငျတိုငျ မန်တလေးစညျပငျခနျးမ Booth No. C – 19/20 မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Read 145 times Last modified on Friday, 10 January 2020 15:54
မန္တလေးမြို့တွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်အခါ စင်ထိုးခြင်းများနှင့် ရေကစားမဏ္ဍပ်ကြီးများကို ပေ ၁၅၀ ထက်ကျော်၍ ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြု
မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် မန္တလေးမြို့အနေဖြင့် ကျုံးတောင်ဘက်ခြမ်းရှိ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်တွင် စင်ထိုးခြင်းများနှင့် ကျုံးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်ကြီးများကို ပေ ၁၅၀ ထက်ပို၍ ဆောက်ခွင့်ပြုပေးသွားမည် မဟုတ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
ဆရာဝနျသဈလှငျမြားအတှကျ ရညျရှယျပွီးတော့ UMMAA ကစီစဉျကငျြးပတဲ့ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲလေးတဈခုနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
နေရာကွက်ကြား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် မိုးလေဝသအခြေအနေများ